Ibhali liwukuvuvukala kwezinwele zezinwele esweni. Njengomthetho, kukhona okungalindelekile, futhi ngokwayo kudlula ezinsukwini ezingu-4-5, kodwa kungabangela izinkinga eziningi ekuphileni kwansuku zonke. Kumele sihambe emsebenzini, sikhulume nabantu, nokuba khona kobuhle "obunjalo" ebusweni abukhuthazi ukuqonda okufanayo kanye nesifiso sokubheka umxhumanisi esweni. Ngaphambi kokuthatha isinyathelo nokufunda mayelana nokwelashwa kwebhali, kufanele sithole ukuthi kwenzekani. Iqhwa elincane emgwaqweni noma isikhathi eside egumbini elibandayo? Abanye abantu basabela ekuziphatheni komzimba .
Ubani obenayo "isipho" esinjalo uzokuthi okokuqala uzizwa udoti oluthile, u-reddening kancane, futhi iso liqala ukuvuvukala. Uma lo mzuzu uphoqelekile futhi ungaqali ukufunda ukuthi ibhali liphathwa kanjani, lonke ijwabu leso lingadada. Ezimweni ezinganakiwe, kubalulekile ukulinda kuze kube yilapho iphutha linyamalale yedwa.
Kusukela ekubukeni kwesayensi, lesi simo siyisenzo sokuvuvukala esibangelwa i-staphylococcus. Izincomo zezokwelapha zokuqeda ukutheleleka zivame ukusetshenziselwa ukwelashwa kwezinhlobo ezahlukene zama-antibiotics ngendlela yamafutha okugcoba, amahlumela. Kulokhu, umbuzo uvele ngokushesha: kungani, lapho uthola ukuthi ibhali liphathwa kanjani ngemithi yabantu kanye nalabo abagulayo, umphumela wezinyathelo ezithathwe kusebenza kakhulu, futhi akuyona neze ingozi? Odokotela abazange bathole impendulo yalo mbuzo, bathambekele kuphela ekusakazeni kulezi zinambuzane izindlela ezinjengokuthi, isibonelo, ukukhafulela iso noma ukuhola inaliti ebhaliwe, bese ubambelela ngaphakathi kwefreyimu bese ukuvuvukala kuzokwehla. Ukugxeka kubalulekile, kodwa kuyasiza. Futhi kumuntu ovamile, umbuzo walokho ibhali okwelashwa ngokushesha ulalalala. Ucabanga ukuthi uyothanda yini: i-antibiotic noma imikhosi yemilingo esebenza kahle? Cha, asibizi ukushiya ukwelashwa kwezokwelapha. Okokuqala, akuwona wonke umuntu okholelwa ezimangalisweni zabantu, futhi okwesibili, imbangela yebhali ingaba esinye isifo, esibi kakhulu, njenge-cyst. Kufanele uhlole udokotela, ikakhulukazi uma uzimisele ukuvuvukala okunjalo. Ekugcineni, kwezinye izimo unikezwa ogulayo ngesifo esinjalo, futhi ngeke "ukhanyise" ngeso lakho lokuvuvukala emsebenzini.
Ngendlela eyodwa odokotela kanye nabahlengikazi abavumile bavuma: ukubeka oluhlaza endaweni evulekile ngosizo lwe-swab yesikotini. Uma ukwenza ngesikhathi, ibhali ngeke liqhume phezulu, futhi uma kwenzeka, lizodlula ngokushesha kakhulu. Ngendlela, ngakho-ke unganquma umbuzo wokuphatha ibhali kumntwana. Akukho lutho olulimazayo, kodwa nakanjani uzobona ukuthi ukwelashwa kuhloswe ngokuqondile esikhwameni esikhulelwe.
Uma kwenzeka ungamukeli ama-antibiotics, awukwazi ukuvakashela udokotela noma usebenzise i-greenie ngenxa yemikhawulo yakhe esikhumbeni, futhi kanjalo, ukuyibeka ngomoya ophansi, izindlela eziyinqaba ngendlela yama-spittles namafenisha amafasitela akukhuthazi ukuthembela kuwe, okungukuthi, ezinye izindlela Ukwelapha. Ake sibheke indlela yokuphatha ibhali ekhaya. Zonke izinhlobo zezitshalo nezitshalo ezinamakhemikhali aphikisayo zingasetshenziselwa ukugula: yenza lotions kusuka calendula, lilac, leaf leaf, i-aloe ijusi, i-chamomile. Kodwa into ebaluleke kakhulu akuyona ukwelashwa, kodwa ukuvimbela. Yidla amavithamini, hamba emoyeni omusha, ulaka - futhi awusoze ube nesithakazelo ezindabeni ezibalulwe kulesi sihloko.
ATV "Grizzly" (Yamaha, Grizzly): tinkhulumo, izici kanye nokubuyekeza